Fitsaram-bahoaka : manilika andraikitra amin’ny rehetra ny mpitondra | NewsMada
Fitsaram-bahoaka : manilika andraikitra amin’ny rehetra ny mpitondra
“Hitantsika tsy takona afenina ny raharaha fitsaram-bahoaka sy ny trangan-javatra maro izay miseho amin’ny tontolon’ny fitsarana. Raha ny toe-tsaina sy ny kolontsaintsika, tsy ekena… Gaga aza isika hoe: fa maninona loatra no tonga amin’izany isika amin’izao fotoana izao?”
Tenin’ny filoha Rajaonarimampianina tamin’ny fitokanana ny tranon’ny mpisolovava teny Anosy, omaly, io. Misy fepetra tsy maintsy raisina. Efa mandray ny tandrify azy ny fitondram-panjakana, fa tokony handray ny azy ny rehetra eo anoloan’ireny trangan-javatra ireny. Ny olom-pirenena izany, ny olom-panjakana, ny olom-boafidy.
“Amin’ny maha filoham-pirenena ahy, efa nandray andraikitra aho ary nanome baiko tomponandraikitra isan-tsokajiny mba handray andraikitra mifanitsy amin’izany”, hoy izy.
Tsy misy olona tokony ho ambonin’ny lalàna. Ny fanajana ny lalàna ihany no antoky ny fampandrosoana. Raha fatra-panaja ny lalàna isika, mametraka ny fahamarinana, miady amin’ny kolikoly: efa be ny dingana vitantsika. Tsy andoavam-bola izany asa izany. tsy misy tetibolam-panjakana tadiavina amin’izany.
Marina fa misy ny rafitra apetraka iadiana amin’izany sy ilana vola, fa isika no manova ny trangan-javatra. Tsy tena zava-dehibe ny fepetra apetraky ny mpamatsy vola amin’izany, fa isika mandray andraikitra
Odian-tsy hita ny tena fototry ny fitsaram-bahoaka
Nahoana no amin’izao fitondrana izao vao tena mirongatra ny fitsaram-bahoaka? Hilamina ve ny raharaha amina kabary, teny midina, baiko? Tsy mbola mirongatra toy izao ny fitsaram-bahoaka: mila fanadihadiana, tsy azo odian-tsy hita.
Maro ny resaka etsy sy eroa: tsy fahatokisana fitondrana, tsy fankasitrahana azy, fikomiana aza. Marina ve izany? Fampisehoana hatezerana, fanamparana alahelo… Nahoana? Tenenina, ohatra, ny ady amin’ny kolikoly, fanajana lalàna… Iza sy aiza no tena tsy misy izany, fa tsy ao anaty fitondrana ao… tsy azo alain-tahaka? Na efa tahafin’ny vahoaka amin’ny fanaovana izay saim-pantany, rehefa tsy mifampiraharaha ihany.
Tsy misy mankasitraka fitsaram-bahoaka, fa tsy azo ailika fotsiny ny raharaha hoe efa nahavita ny tena. Nahoana no tsy nisy fitsaram-bahoaka firy izay ela izay? Mila mandini-tena ny mpitondra, raha mahavita ny andraikiny tokoa ary azo atokisana amin’izay lazainy sy ataony…
Sary : Fanou